Nepal Deep | साग बेच्दै हिड्ने भरतमणि कसरी बने ‘कमेडी च्याम्पियन’ सिजन २ को बिजेता?
साग बेच्दै हिड्ने भरतमणि कसरी बने ‘कमेडी च्याम्पियन’ सिजन २ को बिजेता?
काठमाडौँ। कमेडी च्याम्पियन सिजन २ को बिजेता बनेका भरतमणि पौडल ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका ७ मा जन्मिएका हुन्। उनका दुइ भाई र बहिनि छन् । उनकी आमा देवी पौडेलका अनुसार उनी जन्मँदै सानो जन्मेका थिए, पछि पनि धेरै बिरामी भइरहन्थे। पौडेलकी बहिनी कल्पनाका अनुशार ‘लुरे’ थिए रे !
सानैबाट अरुको क्यारिकेचर गरेर कलाकारिताको यात्राको सुरुवात गरेका हुन्। पौडेल भन्छन ‘मेरो घरको वरपर बस्ने तल्लो माथ्लो घरका मानिसहरुको म क्यारिकेचर गर्थेँ। नक्कल गरेर सुनाउँदा गलल सबैजना हाँस्थे। त्यसपछि म विद्यालयका साथीहरुलाई यो कुरा सुनाउन थालेँ, साथीले अरुलाई सुनाइदिन थाल्नुभयो।’
यस्तो हुँदाहुँदै उनी आफ्नो सर्कलमा परिचित भए। त्यसपछि उनको गाउँमा हुने सभा कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागिता हुन थाल्यो। गाउँमा समारोह आयोजना गर्ने समूहका राजन विश्वकर्मा अवसरको लागि र प्रस्तुतिको लागि भरतमणिले गर्ने मेहनत सम्झन्छन् ।
आफूमा भएको कला हाँस्यव्यंग्य हो भन्ने उनलाई कक्षा ८ पढ्दासम्म थाहा थिएन। कञ्चन एकेडेमी भर्ना भएपछि उनले यही चिजलाई निरन्तरता दिन सकियो भने भविष्यमा कलाकार बन्न सकिन्छ भन्ने उनलाई चेत भयो।
त्यसपछि उनले सामुदायिक रेडियो तमोर १०२ मा कार्यक्रम प्रस्तोताका रुपमा करियर शुरु गरे। यो कार्यक्रममा उनले क्यारिकेचर, जोक भन्ने गर्थे। उनले त्यहाँ ७ वर्ष काम गरे। त्यसपछि उनलाई थुप्रै स्टेज कार्यक्रममा सहभागी हुन थाले।
‘स्टेजमा काम गर्दागर्दै मलाई ठूलो पर्दाको खाँचो भएको महशुस भयो। त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ,’ भरतमणिले घर भ्रमण गरेको भिडियोमा भनेका छन्।
उनले रेडियोबाट उक्त ठाउँमा धेरै लोकप्रियता कमाइसकेका थिए। ताप्लेजुङको फुङ्लिङ बजारमा साग बेचेर हिँडेका पौडेललाई अहिले कलाकार बन्न संघर्षरत युवा भनेर चिनिन पाउँदा खुसी लाग्छ।
अनवरत मेहनत र लगावले उनलाई देश तथा विदेशमा प्रस्तुति दिने मौका मिलायो। सँगसँगै दर्शकको मनमा ठूलो ठाउँ पनि। त्यसैले त ताप्लेजुङ मात्र हैन सबै नेपाल अनि विदेशमा भएका नागरिक नै भरतमणिलाई जिताउन उर्लिए। भरतले पढेको जीपी कोइराला मेमोरियल कलेजका विद्यार्थी पौडेललाई जिताउन लागि परे।
यसबाहेक नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले उनलाई आर्थिक सहयोग गरे। उनलाई नेपाल पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङ, फुङ्लिङ नगरपालिका उनको विद्यालय, ताप्लेजुङका विभिन्न संघसंस्थाहरु नै लागि परे।
उनलाई जिताउन यतिका शक्ति लागि पर्नुमा उनको मात्र हात रहेको छ। भरतका पिता शिव प्रसाद पौडेल कृषि गरेर जीविको चलाउने व्यक्ति हुन्। उनको ताप्लेजुङमा ‘पौडेल कफी हाउस’ रहेको छ।
कमेडी च्याम्पियन सिजन २ को उपाधि सँगै भरतमणिले २५ लाख रुपैयाँ, ड्याट्शनको कार र अन्य धेरै गिफ्ट ह्याम्पर पनि जितेका छन्।